Haircut for izinwele elicolekile noboya elincanyana (isithombe)
Kuyaziwa ukuthi kwekhanda abakhethiwe kahle uyakwazi ngokuphelele ukushintsha nowesifazane alinike isithombe obugagu kanye isikhalazo ezaziwayo. Nokho, ngenxa izici ezithile esiphawuleka ngokukhethekile ukugunda izinwele izinwele esihle nezinwele mncane. Indlela ukunquma ukuthi yikuphi okulungile ngawe? Mayelana-ke namuhla futhi sizobe ukukhuluma.
Haircut for izinwele elicolekile noboya elincanyana - lokho ukukhetha?
Akubona bonke ukujabulisa ubulili bemvelo benawo hair obukhulu kanye namandla. Kodwa, njengoba wochwepheshe uthi, ngisho izinwele mncane futhi kwaphela kungenziwa siguqulwe esebenzisa yokwehlisa kanye isitayela. Phela, sekuyisikhathi eside lwaziwa ukuthi ukulungiswa ezibukwayo angenza izimanga.
Ukukhethwa kwekhanda lizoncika izinto ezifana nobude kokuqala izinwele, umbala, isakhiwo kanye ukuma ebusweni. Ngezinye izikhathi kunzima ngempela ukuze ukhethe kwekhanda kwesokudla, ngakho iningi labesifazane abaphendukela ochwepheshe. Nokho, ngaphambi kokuya salon ubuhle kufanele ufunde imithetho eyisisekelo ngazo ukwakha isithombe esisha.
Okokuqala, kwekhanda lakho kufanele ukudala ivolumu ezengeziwe, okuyinto kudingeka izinwele elincanyana ngakho futhi kwaphela.
Okwesibili, izinwele kufanele kube lula ukuba banakekele futhi isitayela. Ngempela, ezimweni eziningi kunzima ngempela ukuphinda ngokwakho lokho barber wenza ngesikhathi ehambele salon.
Nokho, futhi, okwesithathu, ukwethembela emizweni yabo futhi umuzwa isitayela. Phela, ngosizo izinwele kungaba ukuveza imizwelo futhi ukugcizelela ubuntu babo.
Izici izinwele esihle
Hhayi njalo izinwele akuyona isimo engcono kusukela ekuzalweni. Ngezinye izikhathi ngisho ikhanda obukhulu izinwele kuba mncane futhi ezingavamile ngenxa imithelela engemihle yizici zemvelo, ukucindezeleka futhi elwa namagciwane. Lokhu kudinga trichologist professional kanye yokutakula nokunwetshiwe ukungenela kwezimali ezikhethekile.
Kodwa uma got izinwele mncane futhi thinning ngokwemvelo, khona-ke nje kudingeka ukhethe kwekhanda kwesokudla. Phela, ungakwazi ngokuphelele uguqule noma yimaphi ukubukeka. Kodwa ukuze senze isimo sishube, odinga ukukwazi ezinye izinto ngalolu hlobo izinwele:
izinwele Izacile ekuthanda khona zokugwema ukuphuka, ukulahlekelwa kanye lokushisa ukweqisa. Ngakho zama ukubanakekela ezifanele nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Zama ukusebenzisa amakhemikhali udayi, njengoba lokhu kuzolandelwa kwezulu olunzulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi Umbala ejenti. Hhayi-ke, uma kwakusenolimi isidingo umbala kwempunga, sebenzisa uchwepheshe kunokuba upende yasekhaya.
Ngokuvamile Ukunquma emaphethelweni. Phela, izinwele elincanyana, njengoba umthetho, kukhona eyomile khulu. Ngenxa yalokhu, amathiphu baqale ukuhlukanisa. Isibuyekezo kwekhanda uyobheka wekugcina njalo.
ukugunda izinwele iDemo izinwele elicolekile noboya elincanyana
Kubathandi intsha kanye nesitayela ewubuciko ilungele nezinwele ezimfishane. Phela, nezinwele ezifana uyakwazi ukulungisa ukuma ebusweni futhi unike isithombe ukudlala futhi adambise. A ezihlukahlukene amafomu, okuyizinto athandwa 2015, kuyokusiza ukhethe esiwusizo kakhulu.
ukugunda izinwele iDemo izinwele elicolekile noboya elincanyana, isithombe ukuthi okusesihlokweni esithi ngenhla, kufanelekile abesifazane zanoma iyiphi iminyaka. Phela, njengoba injalo zasendulo "bob iDemo" akaphelelwa ukuhlobana amashumi eminyaka. umphetho etshekile ukuvuselela isithombe bese wenza izici zobuso ivumelane ngaphezulu. Kulokhu, izinwele elincanyana ukuthola lemali ulahlekile futhi uyobheka stylish futhi uzilungise njalo.
Uma ubulokhu ufuna ukuncishiselwa esifushane, kodwa hhayi ixazululwe ke lokhu kukhetha nakanjani kuwe. Phela, kusukela bob iDemo kalula sikhule isigwebo kwenzeka ukuthi umphumela uyoba ukwanelisa wena. Nokho, okuhlangenwe nakho okubonisa ukuthi abantu besifazane akuvamile ukubuyela ezinde ngemva haircuts kakhulu iDemo. Kuyinto elula kakhulu futhi eziwusizo ekuphileni kwansuku zonke.
Thina unamathisele ifomu okudala
Haircuts izinwele ezingavamile esihle akukafuzi kuhlangatshezwene nakho isiko classic. Phela, namuhla, kunanini ngaphambili, ethandwa zezinwele zokudala. Ngakho, unike izinwele zakho ivolumu ukugcizelela nobunye bomuntu ngamunye ezinhlelo usizo ukugunda izinwele, esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi isithombe esilandelayo.
Ngenxa sideburns esifushane futhi izitaki kunalokho eside phezu kudala isithombe sentombazane zokudala. Kulokhu, ongaboni kwandisa umthamo izinwele futhi zigqamise neckline futhi cheekbones. Uma ukhetha le kwekhanda, uzobe in mkhuba ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, i-ukugunda izinwele obungajwayelekile akazange zidinga ukufakwa. Vele afeze ukulungiswa ngesikhathi esifanele.
ukugunda izinwele Creative izinwele elicolekile noboya elincanyana, ukubuyekezwa zazo akhayo kakhulu, kuba ukukhetha ekahle amantombazane ngokugqamile ngubani asesabi uzizamele. Kulokhu, kufanelekile izinwele kokubili mncane futhi obukhulu.
Uma ungeyena uzimisele ahlukane ubude, singakwazi sibheka alungise izinwele kuya emahlombe. Phela, kwekhanda esinjalo izinwele ezingavamile mncane okufanelekela kangcono amantombazane nge round ubuso. I imigqa eqondile of ezakheke zibukeke side futhi umphetho etshekile ukufihla ukukhubazeka ebonakalayo. Ngesikhathi esifanayo ke izinwele esihle anganika elamukelekile. Phela, izingidi uqweqwe mihlobiso kuzokhuphula inani kuphela.
Lokhu ukugunda izinwele kungenzeka ukufunda ngoba izinwele elicolekile noboya elincanyana, izithombe kulesi sihloko, kuyinto cishe yesondlo free. Yingakho-ke kuyakhethwa ngisho abadlali abadumile futhi socialites. A Hlukanisa ukuncishiselwa elula ungakwazi ukoma ukudala ukustaka ezinkulu noma okungekuhle.
Haircut "isitebhisi" izinwele esihle
Ukunikeza isamba esengeziwe sika-inhloko izinwele, ungasebenzisa izinwele, okuyinto bonke eyaziwa ngokuthi "isitebhisi." Imicu, usike kanye ebusweni, uzoguqula ngisho izinwele elincanyana kakhulu futhi kwaphela. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ukhethe kuphela bahlukana phakathi. Ukuze umphumela engcono, ungenza uboya encane izimpande futhi ukukulungisa nge lacquer. Nge kwekhanda enjalo ezizungezile Ngeke ukholwe ukuthi wena - umnikazi we izinwele esihle. Into eyinhloko ukuqapha isimo izinwele njalo ukusika amathiphu.
Ukwenza umthamo ngemibala ushintsho
Yiqiniso, staining njalo yona isakhiwo izinwele. Kodwa ngezinye izikhathi ungase uzizamele ukubukeka kwakho beyofuna isithombe esisha. Haircut for izinwele elicolekile noboya elincanyana kungenziwa nge engavamile multi-ungqimba 3D-staining. Nokho, musa ukusheshe usisebenzisa ngendlela yokugunda eduze ekhaya lakho. Okwamanje, i-3D-staining kungenziwa izingcweti kuphela onekhono kakhulu. Phela, kudinga ulwazi olujulile ayisisekelo umbala.
Ngenxa yalesi Umbala, ungakha inkohliso okubonakalayo ivolumu kanye imicu obukhulu. Kodwa uzilungiselele lokho kuyodingeka afeze ukulungiswa nyangazonke. Ngemva izimpande regrown ngokushesha zichithe kwekhanda lakho. Futhi uma usukhathele isithombe esinjalo, okungase amaKhaladi ithoni zabo zemvelo futhi aqhubeke kwekhanda ephelele ukunikeza umthamo ezengeziwe.
What do abanikazi izinwele ezinde kakhulu?
Muva-ke kwaduma okuthiwa Hollywood ukugunda izinwele izinwele elicolekile noboya elincanyana. Ngathi: "Kuyini?" - ubuza. Kuyinto mkhuba imfashini kakhulu kule minyaka embalwa edlule. Phela, izinwele ezinde inika ubufazi yangempela futhi umusa.
Lokhu ukugunda izinwele kwenziwa esiteji. Kwezinye izimo, lapho izinwele okuhle kakhulu futhi ezingavamile, ngaphezu kwalokho uyakhile imicu yokufakelwa. It ikuvumela ukudala ivolumu esiphezulu futhi ushintsho ukubukeka ngale ukuqashelwa. Futhi lihambisana avelele ezimhlophe ingafinyelela imiphumela emangalisayo izinwele aminyene futhi enile.
Lungisa ukubonakala ngeke kuphela kahle abakhethiwe kwekhanda izinwele elicolekile noboya elincanyana. Indlela ukunquma ukuthi isithombe esikhethiwe kufanelekile na? Wochwepheshe belulekwa ngalolu daba ngale ndlela:
Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo isengezo beauty salon. Lolu hlelo ikuvumela ukuba uzame izithombe ezahlukene intanethi. Kulokhu, umphumela ephelele kungenziwa siboniswe master, okuzokwenza iphupho lakho lifike.
Zama tinhlobo letehlukene packings. Akukhona njalo kunesidingo ukushintsha ngokuphelele ubude isithombe phuca. Izinwele, wahlela nganoma iyiphi enye indlela, bayakwazi uguqule indlela kwansuku zonke. Inketho yimpumelelo kakhulu kokuphakathi obuphelele izinwele - curls enkulu. Lokhu ukufakwa zizohlala imfashini.
Sebenzisa Umbala amashampu. Lezi akuzona njengoba yingozi izinwele njengoba udayi eziphikelelayo. Nokho, ukushintsha ithoni izinwele Ungase futhi zibukeke ulungise ukubukeka. Kungenzeka ukuthi izinwele zakho mncane akuzona abaphumeleli. Udinga nje ukukhetha umbala kwesokudla.
Khumbula ukuthi ngokuphelele yilowo nalowo wesifazane amahle ngokwemvelo. Kuyinto kudingekile kuphela ukugcizelela izinzuzo ukubukeka, futhi avela ekukhanyeni engcono. A zikanokusho kwekhanda yesimanje kuzovumela ukuhlala angenakuvinjwa njalo.
Kazi kungani blonde - "blonde", okusho silly intombazane?
Fishtail - Amathe bonke izikhathi
Amathiphu ambalwa sendlela ukubeka izinwele zakho ekhaya
"Revivor" Amafutha. Uphenyo namafutha kuvuselela izinwele "Revivor"
Eyokuqala Chechen impi kanye nesivumelwano Khasavyurt
"I-Bluetooth" acoustically-system. Ukubuyekeza, izincazelo, Ukucaciswa
Tina: I nencazelo yegama, uhlamvu nesiphetho
Qondisa kulabo abafuna ukwazi ukuthi pay iholide ibalwa
Ifilimu Lipstick. Okumibalabala Lip: izinhlobo kanye nemithetho nokusebenzisa
Indlela yokwenza irobhothi "Maynkraft" futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Igama Arman: ukubaluleka, imvelaphi, umthelela isiphetho umfana